Nhau - Denda Rinononoka Simba Rinobudirira Race
Kushanda kwemagetsi kunotarisirwa kunyora gore rino kufambira mberi kwavo kusimba zvakanyanya mumakore gumi, zvichizounza mamwe matambudziko kuzadzikisa zvinangwa zvemamiriro ekunze, International Energy Agency (IEA) yakadaro mumushumo mutsva neChina.
Kuisa mari nekudyara kwehupfumi kwakadzora zvakanyanya kufambira mberi kwesimba rekushandisa gore rino, kusvika pahafu yezinga rekuvandudza kunoonekwa mumakore maviri apfuura, iyo IEA yakataura mumushumo wayo weEffice Efficiency 2020.
Simba rekutanga pasirese simba, chiratidzo chakakosha chekuti mashandiro epasi rose anoshandisa sei simba, inotarisirwa kuvandudzwa nepasi pe1 muzana muna 2020, iyo yakaderera simba kubvira 2010, sekureva kwemushumo. Iyo mwero iri pazasi peiyo inodiwa kuti ubudirire kugadzirisa shanduko yemamiriro ekunze uye kuderedza kusvibiswa kwemhepo, iyo IEA yakati.
Sekureva kwezvakafungidzirwa nesangano, kugona kwesimba kunotarisirwa kuendesa zvinodarika makumi mana muzana peshuwa yekudzikiswa kwemagetsi anokonzerwa nemagetsi mumakore gumi anotevera muIEA's Sustainable Development Scenario.
Kudyara kudiki muzvivakwa zvinopa simba-simba uye kushoma kwekutengesa mota nyowani mukati mezvematambudziko ehupfumi kuri kuwedzera kuwedzera kunonoka kwekufamba kwesimba gore rino, rakamiririrwa neParis.
Pasi rose, kudyara mushandiso yemagetsi kuri munzira yekudzikira ne9 muzana gore rino.
Makore matatu anotevera ichave nguva yakakosha iyo pasi rose richava nemukana wekudzora tsika yekunonoka kuvandudzwa kwesimba kwemagetsi, akadaro IEA.
"Kune hurumende dzakanangana nekusimudzira kushanda zvakanaka kwesimba, iyo litmus test ichave iyo huwandu hwezviwanikwa zvavanopa kwazviri mune avo ekugadzirisa hupfumi, uko matanho ekugona anogona kubatsira kusimudzira kukura kwehupfumi nekusika kwemabasa," Fatih Birol, Executive Director we iyo IEA, yakadaro muchirevo.
“Simba remagetsi rinofanira kuve pamusoro pazvinhu zvinofanirwa kuitwa nehurumende kutsvaga rutsigiro - inyaya yemabasa, inoita kuti zviitwe nehupfumi, inochengetera vatengi mari, inovandudza zvigadzirwa zvakakosha uye inoderedza mweya. Hapana chikonzero chekusaisa zviwanikwa kure kumashure, "Birol akawedzera.